Forum serasera malagasy SOS "Homosexualité" - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : SOS "Homosexualité"
Langoro318 - 19/05/2014 14:50
Tena loza ray olona fa angamba iezahan'ireto vazaha ratsy fanahy ireto ampidirana eto amintsika ity fiarahan'ny lahy samy lahy sy vavy samy vavy ity a! Ny horonantsary rehetra manintona ny tanora ankehitriny, ny fiainan'ireo mpanakanto malaza ankafizin'izy ireo,....ahitana taratra izany avokoa. Inona no tokony hatao?????
hery - 19/05/2014 15:33
Ny hoe loza aloha dia tsisy azo atao e. Efa hatramin'ny androndry Abrahama no efa nisy ny olona voasarika tamina lehilahy tahaka izany ary anisan'ny nandrodanana an'i Sodoma http://baiboly.katolika.org/boky/Jenezy/19
Amiko dia tsy zavatra mifindra io na aretina atahorana ka tsy hampaninona ny mpijery. Ny olona "hetero" na dia hoe hisy filma be dia be momba ny "homo" aza tsy hihontsona (vao maika ara ho rikoriko)...
vahiny2004 - 21/05/2014 13:58
Voalohany aloha dia tsy afaka hilaza aho hoe tsara na ratsy ny homosexualité. Ny homosexualité dia réalité ary ny mpanao film dia mi s'inspirer @ réalité hatrany
Anjaran'ny ray aman-dreny ny mitaiza ny zanany fa tsy avela tezain'ny tontolo fotsiny, mampianatra azy hanavaka ny tsara sy ratsy. Tsy fitaizana ny manafina @ ankizy ny zavatra heverina fa ratsy, raha tsy fantany ny ratsy dia tsy afaka mi apprécier ny tsara izy
Averiko fa tsy milaza aho hoe tsara na ratsy ny homosexualité. Valable @ sujet rehetra io lazaiko momba ny fitaizana io
ZAKAIOSY - 28/06/2014 03:29
Amiko kosa dia TENA RATSY ny homosexualité, tahaka ny maha-ratsy ny RABOKA, ny SIDA, ny CANCER ...Satria samy aretina daholo ireo, ny Psychologue sy Psychiatre ary ny Sociologue sy ny mitovitovy @zany no mba iriko hiditra eto hanazava tsara ny maha-aretina ny homosexualité. Noho izany, olona mila fanampiana ny olona "homosexuel" fa tsy olon-dratsy akory, ilay aretina no ratsy fa tsy ilay olona. Efa nisy fandaharana t@ Radio Madagasikara, efa ela, tany @ 1986 tany ho any angamba, nisy "homosexuel" vahiny tao ary niaiky io fa aretina ny mahazo azy, te hiala izy fa tsy vitany izy irery ny miala @ilay aretina satria aretina sarotra tsaboina.
ZAKAIOSY - 28/06/2014 03:30
Fitokisana - 01/08/2014 17:29
Ny Homosexualite tsy aretina akory, fa identite normale ohatran'ny heterosexalite sy bisexuelle. Tsy azo ampitovisina anefa ny homosexuel sy ny olona attirer @ olona sexe mitovy aminy. Misy olona attirer @ olona sexe mitovy aminy nefa tsy homosexuelle. Io le decision, na safidy, na fitaizana sns no mahatonga azy hiaraka @ olona mitovy sexe aminy.
Na tsara taiza tahakan'inona, na hoentina ambavaka sy mino be aza ny zaza iray ka homosexuelle, tsy ho lasa hetero mihintsy. Matetika ny tanora homosexuelle mijaly be indrindra satria tsy mahazo ny zavatra mahazo azy(ara-tsiantifika). Maro amin'izy ireny no mamono tena. Ny tsy fankasitrahan'ny ray aman-dreny, sy na fiarahamonina sns etsy andaniny, etsy ankilany tsisy fitsaboana contre homosexueliate.
Tsy maniry an'iza n'iza ho homosexuel aho na hananjanaka homosexuel. Tokony ho comprehensive sy tsy handatsa na hanenjika azy ireny isika . Na tsy tiana sy ankasitrahana aza, tokony hajaina satria olombelona ohatra antsika tsirairay ireny manana ny zoany sy ny fiainany. Misy explication be dia be @ teny frantsay na resaka medicine, na psychologie manazava ny phenomene d'homosexualite. Ka alohan'ny hanenjehana sy hitsarana de fantaro aloha ny mikasika azy!
mpisotrtoaka - 18/08/2014 13:10
Tsy mila compréhension izany rah mbola ao ny Feon'ny fieritreretana maha-olona anao ! Tsy iadian-kevitra io fa fialana bala ny ankoatr'izay !
mpisotrtoaka - 09/09/2014 10:35
Tena LOZA izany ko ts loza ahoana rangah ty a ! Efa hita izao fa mis resaka volabe mihodina ao ambadika ao d hoe ts loza ! Izay ilay mahavoa ! Ts te handinika d hoe efa hatramin'ny andron'i Abrahama sns... Ts afaka miova ho tsara miits ve fa izay nataon'ny teo aloha d voatery ts maintsy hanaranaka !!?